February 2022 – List Khabar
फागुन १७ गते मंगलबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
February 28, 2022 जीवनशैली 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मनमा चिन्ता बढ्ने योग छ । साथै, धनमाल हराउन सक्छ । उद्योग तथा व्यापारमा सामान्य फाइदा मिल्नेछ । साथै सामान्य रोगले सताउला । अस्वभाविक प्रलोभनले अप्ठ्यारोमा परिएला । यसले आफ्नो स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ । नसोचेको ठाँउमा खर्च हुन सक्छ …
नेपाल बन्द सकिनै लाग्दा एमाले पार्टी कार्यालय ध्वस्त, थप विवरणसहित
February 28, 2022 समाचार 0
काठमाडौँ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा गरिएको नेपाल बन्द सकिएको छ । तर बन्द सकिने लाग्दा सुर्खेतमा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको छ । सोमबार बिहान ६ बजेदेखि नै सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरको सडकमा नाराबाजी गर्दै आएका युवाहरुले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका हुन् …
१३ वर्षको उमेरमा आफन्तबाटै कोठीमा बेचिएकी युवतीको कथा : अस्पतालमा मेरो पाठेघरसमेत झिक्न लगाइयो
१३ वर्षको उमेरमा आफन्तबाटै भारतको कोठीमा पुर्‍याइएकी एक बालिका सात वर्षपछि घर फर्केकी छन्। भारतको दिल्लीस्थित कागज कारखानामा काम लगाउने भन्दै लगिएकी ती बालिकालाई कोठीमा पुर्‍याइएको थियो। कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी ती बालिकालाई माइजू नन्दकली र उनकै दुई छोरी तारा र ममताले दिल्ली पुर्‍याएका थिए। बालिकाका बुवा सानैमा बिते। …
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नायक पल शाहले हलमा दर्शकसँग बसेर आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनले पक्राउ पर्नुअघि जारी गरेको भिडिओ सन्देशमा आफ्नो यो इच्छा पूरा गरिदिन प्रहरीलाई अनुरोध गरेका थिए । उनले सन्देशमा भनेका थिए, ‘हुन त कति सम्भव हुन्छ …
मंगलबार परेको महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा विशेष ट्राफिक योजना तयार पारिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पशुपतिमा हुने महाशिवरात्रिका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा गरेको हो । शिवरात्रिको दिन काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा हुने भीड व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन निषेध गरेको छ ।पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको …
समीक्षा नाबालिका नभएको खुलासा !
नाबालिकाको हकमा मेरो देशको कानून मलाई काँचो नै लाग्छ । किनभने……से- क्स ग’र्दा आनन्दको अनुभूति गर्ने उमेरलाई कसरी नाबालिका भन्ने ? कुनैपनि स्थानमा, कुनैपनि परिस्थितिमा र कुनैपनि नियतले यदि कुनै पुरुषले स्पर्श गर्दा श’रीरका विभिन्न अं’गहरु फुल्छ भने त्यो उमेरलाई के नाबालिका भन्न मिल्छ ? आँखा आँखाको ईशारा गरेर, पहिलो …
घरको अभिभावक दाइ नै जेल परेपछि पलकी बहिनि यसरी पुगिन हिरासतमा भेट्न (भिडियो सहित)
काठमाडौं – अभिनेता पल शाह यतिबेला तनहुँको प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई एक १७ वर्षकी किशोरीले इच्छा विपरित कर णी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरिएको थियो । किशोरीले उजुरी दिएको ५ दिन पछि उनी आफै प्रहरी सम्पर्कमा पुगेका थिए । उनलाई अदालतले ७ दिन …
हिरासतमा पल सुत्ने ओछ्यान यस्तो : अब ७ दिन हिरासत भित्रै बस्नुपर्ने ( भिडियो सहित )
नायक पल शाहविरुद्ध ब’ला’त्का’रसम्बन्धी अर्को उजुरी परेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को इलाका प्रह’री कार्यालय गैँडाकोटमा अभिनेता शाहविरुद्ध आज आइतवार ब’ला’त्का’रसम्बन्धी उजुरी जाहेरी गरिएको हो । गैँडाकोट–५ मा रहेको गैँडाकोट रिसोर्टमा विसं २०७७ चैत ७ गते गीत सुटिङका क्रममा कलाकार पल शाहबाट ब’ला’त्कृत भ’ए’को भन्दै एक १७ वर्षीया गायिकाले उजुरी …
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना !
संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वरमा श`ङ्कास्पद व`स्तु भेटिएको छ । संसद् भवनको अगाडि सडकको बीच भागमा ‘नो एम`सीसी’ लेखिएको प्रे`सर कु`कर भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । व्यक्तिले त्यहाँ शङ्`कास्पद वस्तु राखेर हिँडेका जानकारीमा आएको छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ । सेनाको ब.., डि`स्पो`जल टोली त्यहाँ पुग्दै छ । शङ्का`स्पद …
पल र नाबालिका गायिकाको बारेमा बोलिन गायिका ज्योति मगर, खोलिन यस्तो भित्रि कुरा
काठमाडौं,नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आइतबार आत्मसमर्पण गरेका नायक पल शाहलाई ७ दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले म्याद दिएको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतले पललाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँकाअनुसार पलमाथि अनुसन्धान गर्न …